Sarimihetsika : mitondra zava-baovao maro ny RFC faha-13 | NewsMada
Sarimihetsika : mitondra zava-baovao maro ny RFC faha-13
Hanomboka ny zoma hariva izao ny andiany faha-13 amin’ny « Festival Rencontres du film court » na RFC, hetsika miompana tanteraka amin’ny tontolon’ny horonantsary fohy. Toerana maromaro no handray izany, toy ny Institut français de Madagascar (IFM), ny Alliance françaises manerana ny Nosy, ny Cercle germano-malagasy (CGM), ny Cinépax, ny IKM, sns.
Anisan’ny ahafantarana ity « festival » ity ny fifaninanana horonantsary fohy, ahitana sokajy telo : « animation », « fiction », fanadihadiana. Samy nosokafana amin’ny mpanatontosa aty Afrika avokoa ireo sokajy ifaninanana ireo ka tamin’ireo nisoratra anarana, miisa valo no voaray ao amin’ny sokajy « fanadihadiana », dimy amin’ny « animation » ary 11 amin’ny « fiction ». « L’Afrique e(s)t le monde » no lohahevitra amin’ity andiany ity.
Na izany aza, mitondra zava-baovao maro ny mpikarakara ny RFC amin’ity andiany faha-13 ity. Voalohany amin’izany ny « Grand prix RFC » ka isafidianana amin’izany ny sokajy rehetra. Loka ho azon’ny mpandresy amin’io ny fandraisana anjara amina « festival » lehibe any Sina sy any amin’ny firenena maromaro hafa.
Ankoatra io, hisy koa ny « Prix du public », ahazoana ny « Zébu d’or national » ka ireo horonantsary malagasy no isafidianan’ny rehetra. Hoany amin’ny « Festival Off-courts » any Trouville kosa ny mpandresy amin’ity sokajy ity. Ankoatra ny etsy amin’ny IFM, handefa ny horonantsary koa ny TVM sy ireo Alliances françaises. Ankoatra ny mpitsara matihanina, misy tanora miisa dimy avy amin’ny lycée sy kolejy handray anjara amin’ny fitsarana.
Volana vaovao, fomba fiaina vaovao… 02/03/2021
Halatra fiara “minibus” narahina vonoan’olona: miaramila kaporaly iray no nitetika antsy ilay mpamily 02/03/2021
Tselatra: Distrikan’i Bealanana 02/03/2021
Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena: nofoanana ny Faritany miaramila 02/03/2021
Lalana Tsarasaotra: tsy tana ny ain’ilay mpitarika sarety nofaohin’ny fiara 02/03/2021